जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न तपाईं कसरी योगदान पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
हरेक दिन त्यहाँ नकारात्मक प्रभावको बारेमा चर्चा छ जुन जलवायु परिवर्तनले विश्वभरि उत्पादन गर्दैछ। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन व्यक्तिगत रूपमा, भाग लिन र यसको लड्न र यसलाई कम गर्न आफ्नो बालुवाको योगदान दिन चाहन्छन्।
यद्यपि जलवायु परिवर्तनका सबै असरहरू, सायद तपाईं बस्ने ठाउँको कारणले गर्दा, तपाईंबाट अलिक टाढा देखिन्छ, हामी सबै यस घटनाको लागि जिम्मेवार छौं। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कसरी जलवायु परिवर्तनसँग लड्नको लागि तपाइँको बालुवाको धान्य योगदान गर्ने?
1 सावधान रहनुहोस् कि हामी समस्याको हिस्सा हौं
2 मौसम परिवर्तन रोक्न कार्यहरू
3 विशिष्ट सन्देशहरू प्रयोग गर्नुहोस्
सावधान रहनुहोस् कि हामी समस्याको हिस्सा हौं
यद्यपि हामीले मौसम परिवर्तनको अग्रिमतामा नायकहरू महसुस गर्दैनौं, किन कि हाम्रो व्यक्तिगत प्रभावमा बढी असर पर्दैन, हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि हामी संसारमा एक्लै बस्दैनौं र हामीजस्तै अरु 7,5. billion अरब बढी छन्।
व्यक्तिगत स्तरमा हामी सीओ २ र अन्य हरितगृह ग्यासहरू वातावरणमा उत्सर्जन गर्दछौं जब हामी आफ्नै गाडी वा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छौं। जब हामी घरमा बिजुली प्रयोग गर्छौं, हामी शपिंग आदि गर्छौं। लगभग हामीले उपभोग गर्ने सबैको उत्सर्जन यसको उत्पादन, प्याकेजि,, वितरण, आदिसँग सम्बन्धित छ। यस कारणले गर्दा, हाम्रो दैनिक कार्यहरूले ग्लोबल वार्मिंगमा वृद्धि गर्न योगदान गर्दछ, त्यसैले, जलवायु परिवर्तनको प्रभावको विकासमा।
यो एक व्यक्तिगत स्तर मा जलवायु परिवर्तन संग लड्न असम्भव छ, हामी यसलाई बढावा दिने बानी हटाउन मद्दत गर्न सक्छौं। त्यहाँ धेरै कार्यहरू छन् जुन वातावरणको लागि लाभदायक छ र त्यसले जलवायु परिवर्तनको वृद्धिलाई रोक्न मद्दत गर्दछ।
मौसम परिवर्तन रोक्न कार्यहरू
हामीले परिवर्तन गर्नु पर्ने कार्यहरू दुवै व्यक्तिगत र सामूहिक हुन्। सामाजिक सहभागिता सार्वजनिक नीतिहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ जसले वातावरणमा हाम्रा प्रभावहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ। नीतिहरू हुनु पर्छ मुख्य रूपले डेकार्बनाइसन र ऊर्जा स transition्क्रमणको उद्देश्य होकिनभने तिनीहरू प्रदूषणको स्रोत हुन् जसले जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउँछन्।
नवीकरणीय उर्जाहरू ऊर्जाको भविष्य हुन्। हामी चाँडै वा पछि मुख्य ऊर्जा स्रोतको रूपमा नवीकरणीयहरू विकास गर्न र प्रयोग गर्न एक तरिका वा अर्कोमा बाध्य हुन्छौं। या त किनभने जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विनाशकारी हो वा जीवाश्म ईन्धनको ह्रासको कारण।
नागरिकहरूलाई सार्वजनिक नीतिमा भाग लिन अनुमति दिंदा सबैको लागि अझ विस्तृत, सूचित, राम्रोसँग बुझ्ने र सुदृढ नीतिहरू उत्पादन गर्न अनुमति दिनेछ, संस्थाहरूमा विश्वास बढाउनुका साथै। यो उल्लेख गरिएको छ कि व्यक्तिगत स्तरमा धेरै गर्न सकिदैन, तर जलवायु परिवर्तनको बिरूद्ध सामाजिक सहभागिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनभने समाज उपभोग, ऊर्जा र गतिशीलता मोडेलमा परिवर्तनको मुख्य कारण हो जसले ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा वर्तमान बृद्धिलाई योगदान पुर्‍याउँछ। यदि कुनै समाजले अधिक दिगो र कम प्रदूषणशील गतिशीलताको लागि परिवर्तनहरू सोध्नमा सीमित राख्छ भने, यसले जलवायु परिवर्तनमा योगदान पुर्‍याउने उत्सर्जनलाई घटाउने छ।
यसका लागि त्यहाँ पहिले नै उपकरणहरू लागू गरिएको छ जस्तो शहरहरूमा राम्रो एजेन्डा 21१ 1992 XNUMX २ मा रियो दि जेनेरियोमा भएको पृथ्वी शिखर सम्मेलनको शुरुवात नगरपालिका वातावरणीय कार्ययोजनालाई परिभाषित गर्न नागरिक फोरम मार्फत नागरिकहरूको सहभागिता हो।
अधिक दिगो वातावरणीय नीतिहरूको विकासमा राम्रोसँग भाग लिनको लागि, तपाईंले विश्वव्यापी रूपमा सोच्नु पर्छ र स्थानीय रूपमा कार्य गर्नुपर्दछ। उदाहरण को लागी, जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोध गर्न तपाईले लिन सक्ने व्यक्तिगत कार्यहरु मध्ये एक भनेको तपाईको घरमा उत्पन्न भएको फोहोरलाई राम्रोसँग रिसायकल गर्नु हो। यो बढ्नेछ सामग्रीको पुनः प्रयोग र कच्चा मालको कटौती प्रदूषण उत्सर्जनको परिणामस्वरूप कटौतीको साथ।
विशिष्ट सन्देशहरू प्रयोग गर्नुहोस्
मौसम परिवर्तनमा प्रसारणको समयमा, यो अलार्मिस्ट सन्देशहरूले विश्वको अन्त्य घोषणा गर्ने बेलादेखि यसलाई प्रतिबिम्बित गरिएको छ। तिनीहरू नागरिकको सहभागिता बढाउनमा दक्ष छैनन्। त्यसकारण, कुनै निश्चित वातावरणीय समस्याको व्यवहार्य र सम्भावित समाधानहरूमा जोड दिन र यसबाट प्राप्त हुने फाइदाहरू पत्ता लगाउन यो अधिक सही छ।
समाजलाई जलवायु परिवर्तनको बिरूद्ध सहभागी हुन सहयोग पुर्‍याउनु भनेको हाम्रो दिनको कुराकानी बढाउनु हो जुन यससँग डील गर्दछ। त्यसोभए हामी उनीहरूको बारेमा ज्ञान लिई हामी अझ राम्ररी जान्न र सही ढ act्गले कार्य गर्न चाहेको चासो र चासो जगाउन सक्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न तपाईं कसरी योगदान पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ?
खाडी भनेको के हो?